# 1 Amafemu Omthetho Aphezulu eDubai | Amafemu Omthetho we-UAE & Abameli | Izinkampani Zomthetho eDubai
# 1 Inkampani Yezomthetho Ephezulu eDubai, e-UAE
Amathiphu Okukhetha Ifemu Yomthetho e-UAE
Inkampani Eqine Kakhulu Yomthetho eDubai
Noma uzifunela iseluleko sezomthetho wena, umndeni wakho, noma inkampani yakho, kubalulekile ukuthi wenze ngokuzimisela lapho uthatha isinqumo ngefemu yabameli. Lokhu kungabonakala njengenqubo enzima ngamafemu omthetho ahlukahlukene eDubai.
Ukuthola ummeli omuhle kudlulela ngaphezu kokukhetha inkampani yezomthetho engahleliwe encwadini yezingcingo noma ngokushayela lowo oseduze nawe. Udinga ukunaka izidingo zakho ezithile bese uzifanisa nefemu yabameli enolwazi lokuhlangabezana nalezo zidingo.
E-Dubai, abameli bahlukaniswe izigaba ezimbili, kuya ngemisebenzi yabo - ababonisi bezomthetho nabameli.
Umxhumanisi wezomthetho akawenzi umthetho ngaphambi kwenkantolo yomthetho. Ngokuvamile baphatha imisebenzi esemthethweni ehlobene nebhizinisi neminye imikhakha. Balungisa izivumelwano futhi bahlole ukuba semthethweni noma okunye kokuthengiselana kwebhizinisi. Ngakolunye uhlangothi, abameli ngabameli abavela enkantolo. Umsebenzi wabo ukuvikela noma ukuphoqelela amalungelo amaklayenti abo.
Akuwona wonke amafemu ezomthetho e-Dubai anelayisensi yokumela kanye neyokuxhumanisa nezomthetho. Iningi limane linelayisensi yokubonisana ngezomthetho. Ukuba naleyo layisensi kukodwa kusho ukuthi abameli kuleyo nkampani yabameli abakwazi ukuvela enkantolo. Ngakolunye uhlangothi, ilayisensi yokumela kanye neyokuthintana nezomthetho igunyaza abameli ukuthi bavele emacaleni asenkantolo.
Noma ngubani angathola ukuthi hlobo luni lwelayisensi inkampani yezomthetho yaseDubai enayo ngokubheka igama lokuhweba. Uma inkampani yezomthetho ye-UAE inenkulumo ethi 'abameli nababonisi bezomthetho,' khona-ke inkampani yabameli ingamela amaklayenti enkantolo. Kepha uma igama lokuhweba linamagama athi 'ukubonisana ngezomthetho' kuphela, kusho ukuthi inkampani yabameli ayinabo abameli abangavela enkantolo.
Kungakhathalekile ukuthi ufuna iseluleko sezomthetho noma ukumelwa ngokomthetho, ukukhetha ifemu yabameli enelayisensi yokugqugquzela nelokubonisana ngezomthetho kuhlale kuyalulekwa. Ukumangalelwa kuhlale kunokwenzeka kunoma yikuphi. Ngakho-ke, udinga inkampani yabameli engakumela enkantolo uma kunesidingo.
Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants (Lawyers UAE) ingabe leyo nkampani yabameli. Imisebenzi yethu isukela kokuthengiselana kuya ezinkantolo zobugebengu, ukuxazululwa kwezingxabano nomthetho womndeni.
Ungayikhetha Kanjani Inkampani Yezomthetho e-UAE?
Ukuqasha inkampani yabameli ngezindaba zakho noma zebhizinisi lakho, kufanele wazi kahle ngohlobo lwefemu yabameli ekufanelekela kangcono. Nazi ezinye izinto okufanele uzicabangele namathiphu wokukhetha ifemu yabameli engcono kakhulu kuwe.
Indawo Yobungcweti: Amanye amafemu wezomthetho anciphisa ubuchwepheshe bawo emikhakheni ethile ngenkathi amanye esingatha izindaba ezijwayelekile. Ngakho-ke, ungathola inkampani esebenza ngokukhethekile ezindabeni zebhizinisi noma ezindabeni zokwakha. Ngaphambi kokukhetha inkampani yezomthetho, qiniseka ukuthola ukuthi iyiphi indawo yezomthetho abakhethekile kuyo. Ngaleyo ndlela, ungathola ukuthi ngabe yiyona nkampani yabameli engcono kakhulu yokusingatha udaba lwakho.
Idumela ne-Track Record: Lapho ukhetha inkampani yabameli, thola ukuthi ngabe bake bawaphatha yini amacala afana nelakho. Uma bewenzile, thola ukuthi bawasingatha kanjani lawo macala. Ngabe wonke amacala ahamba ngendlela ende futhi eyisidina yamacala? Noma baxazulule amacala amaningi ngaphandle kwenkantolo? Udinga ukuthola amazinga okuphumelela wefemu. Ungakwenza lokhu ngokucela izinkomba izinkomba. Ungathola nobufakazi kuwebhusayithi yenkampani yabameli.
Cost: Kubalulekile ukuthi wazi amanani enkokhiso yenkampani ngaphambi kokuyiqasha ukuze ungabanjwa ungazelele. Thola uhlelo lwabo lokukhokha. Ngabe bakhokhisa ngehora, isilinganiso esinqunyiwe, noma isisekelo semali yezimo ezingaba khona? Ukwazi lokhu kuzokusiza ukunquma ukuthi ngabe yiyona nkampani ekufanele yini ngokususelwa kubhajethi yakho.
Ukufaneleka Kwabameli: Ungahlola abameli kule femu ofuna ukuyiqasha. Buza imibuzo ngobunikazi babo, isizinda semfundo, kanye nokuxhumana kwenhlangano. Khuluma nabo uma udinga. Khumbula, uzimisele ngokuqasha insizakalo yezomthetho engcono kakhulu.
Yiziphi izinselelo ezihambisana nokuSebenza neFemu Yomthetho Elikhulu?
Ngokuvamile, amafemu ezomthetho athathwa njengamakhulu noma amakhulu uma enabameli abaningi kanye nabasizi bezomthetho abaqashile. Inkampani enkulu yabameli ingahle ingabi yinkampani yomthetho engcono kakhulu kuwe ngaso sonke isikhathi.
Ngenkathi ukuqasha inkampani yamagama 'amakhulu' kungaba nezinzuzo zayo, kunezinselelo zayo. Lokhu kufaka phakathi:
Akukho ukunakwa okukhethekile ecaleni: Inkampani enkulu yabameli inamacala amaningi okufanele abhekane nawo. Abameli kungenzeka bangabi nalo ithuba lokunikeza icala ngalinye ukuzinikezela, ukunakwa, nokuzibophezela okudingekayo. Icala lakho lingavele ligwinywe kuwo wonke amanye amacala njenge 'enye inombolo'.
Ukwethembeka kuNkampani ngecala lakho: Uma usebenza nenkampani yabameli encane, uqasha ummeli uqobo hhayi inkampani. Ufanele uxoxe ngecala lakho nommeli wakho, hhayi umsizi wezomthetho noma umsizi wezomthetho. Ngamafemu amakhulu abameli, awusoze wahlangana nommeli wakho uze ube senkantolo. Noma kungadingeka ukuthi usebenze nethimba labameli. Ngakho-ke, kungumuntu ohlukile njalo lapho uxhumana naleyo femu yabameli. Ungahle ungatholi izincazelo noma isiqondiso lapho usidinga ezimweni ezinjalo.
Amanani aphezulu: Amafemu amakhulu omthetho aziwa ngokushaja amanani aphakeme impela. Ngakho-ke, umuntu ojwayelekile kungadingeka ukuthi aphule ibhange ukuze akhokhele lawo mareti.
Izinzuzo Zokusebenza Nenkampani Yomthetho Encane
Amafemu abameli abancane eDubai ahlukaniswe ngenani labameli abaqashile kubo. Ifemu yabammeli abancane ingaba nabameli abangama-20 noma ngaphansi. Ezinye izinzuzo zokuqasha inkampani yabameli abancane zifaka:
Icala lakho likubaluleke kakhulu: Ifemu yabameli abancane ayinayo inani lomsebenzi omningi inkampani yabameli enayo. Lokhu kusho ukuthi abameli abaphethe icala ngalinye bazokwenza lokho ngokunganaki okuhlukanisiwe nangokuzinikela okuphelele. Ngakho-ke, lonke iklayenti elilodwa lingaqiniseka ukuthi abameli bazosingatha izindaba zabo ngokunakekelwa okufanele.
Ubudlelwano beKlayenti noMmeli: Njengeklayenti eliqasha inkampani yabammeli abancane, uyakwazi ukufinyelela ngqo kummeli obhekele icala lakho. Unethuba lokubuza ukuthi bakhulume yonke imininingwane oyibona idingeka. Lobu budlelwane bamakhasimende nabammeli abuvamile ukwakhiwa enkampanini enkulu yabameli.
Idumela: Kulula ukulandela umkhondo wedumela lommeli ophethe udaba lwakho enkampanini encane. Ungakwazi ukulandela amarekhodi akhe edlule, futhi imiphumela izuzwe kuze kube manje. Kukunika ukuzethemba ukuthi udaba lwakho lusezandleni ezinhle. Ngokwengeziwe, abameli abangabodwa enkampanini yabammeli abancane bayabonakala kakhulu. Lokhu kusho ukuthi idumela labo lisemgqeni. Abakwazi ukucasha ngesithunzi sefemu yabameli. Njengalokhu, balwa ngokuqina nangokulwa ukuthola imiphumela emihle kuwo wonke amacala abo, noma ngabe mancane kangakanani.
Izindleko ezingabizi: Okubiza kakhulu akulingani njalo nezinsizakalo ezingcono. Futhi akuqinisekisi ukuthi uzowina. Ngefemu encane, ungathola izinsizakalo ezihamba phambili zezobuchwepheshe ngezindleko ezingabizi. Lokho kuyisivumelwano sokuwina.
Khetha iFree Law Firm ye-UAE
Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants (Lawyers UAE) yinkampani yezomthetho yase-Dubai enesipiliyoni esikhulu emthethweni womndeni, umthetho wobugebengu, umthetho wezokwakha, kanye nezinsizakalo ezijwayelekile zokuthengiselana. Sineqembu elizinikele labameli bendawo nabakhuluma isi-Arabhu abane- ilungelo lezithameli ezinkantolo ze-UAE kanye nokuphenya ngobugebengu.
Inkampani yezomthetho esezingeni eliphezulu e-Dubai, i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants (Lawyers UAE), ibisiza amakhasimende omhlaba nawesifunda ngamasevisi ayo ahlukile nezindawo zokuzijwayeza iminyaka engaphezu kweshumi. Njengefemu yezomthetho esebenza ngokugcwele, i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants (Lawyers UAE) baye baba nelungelo kanye nezinzuzo zokuhlangabezana nezidingo zamaklayenti ahlukahlukene ngokuphathelene nokumangalelana, ukuxazululwa kwezingxabano, nokubonisana nezomthetho. Siyiqembu labachwepheshe bezomthetho abaqeqeshiwe abahlinzeka ngemisebenzi eminingi yezomthetho eDubai, e-UAE.
Uma udinga izinsizakalo zomthetho e-UAE, Xhumana nathi ngokushesha. Sizibophezele futhi sizinikele ekuhlangabezaneni nazo zonke izidingo zakho zomthetho.